Hazakazaky Ny Fitantanan-draharaha Rosiana Hanara-maso Ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Hazakazaky Ny Fitantanan-draharaha Rosiana Hanara-maso Ny Aterineto
Voadika ny 13 Jolay 2014 17:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, Deutsch, English
Ny tontolo ratsin'ny fanarahamaso ny aterineto Rosiana. Sary nafangaron'ny mpanoratra
Mihazakazaka fatratra ho amin'ny fifehezana tanteraka ny aterineto ny mpanao lalàna sy ny polisy Rosiana. Efa ho roa taona mahery izao no namoahan'ny parlemanta ny lalàna mametra ny fampiasana ny aterineto. Efa mihanoka tanteraka ao anatin'ireto lalàna vaovao ireto ankehitriny ny manampahefana Rosiana ka ara-dalàna ny fahafahany manakatona, manidy na manakana izay zavatra rehetra mety hitranga ao anaty aterineto. Nitandrina fatratra ny tao Kremlin tsy hikendry ny sehatry ny fandraharahana Rosiana, nefa kosa lasa tsy nitsaha-mitombo ny tsy fahazoana antoka amin'ny fanehoan-kevitra ara-politika ety anaty aterineto.
Na dia eo aza ny fihazakazaky ny fitomboan'ireo fameperana ny aterineto ao amin'ity firenena ity, dia mbola nihoaran'ny polisy Rosiana ihany ny mpanao lalàna, tamin'ny fanenjehana ireo mpampiasa aterineto noho ny zavatra nataony izay mbola tsy nihelohin'ny lalàna akory. Ny 20 Jona dia nanao dingana hanentsenana io banga io ny Duma, tamin'ny fandaniana ny lalàna izay mamela ny governemanta handefa olona any am-ponja hatramin'ny dimy taona – izany rehetra izany noho ny fanelezana, famerenana manely “vaovao mihoa-pefy.”
Mifanaraka tsara mihitsy amin'ny “fihodin'ny toe-draharaha” izay mibaribary loatra ao Rosiana ao anatin'ny fe-potoam-piasana fahatelon'ny Filoha Vladimir Putin ilay lalàna vaovao, kanefa efa tamin'ny Aogositra 2011 no namolavolàna ilay tolo-dalàna voalohany, izay mbola talohan'ny “ririnin'ny tsy hafaliana” tao Rosia. Tsy nisy ifandraisany, notsindriana mafy kokoa tao anaty naoty iray fitondràna fanazavana naraikitra tamin'ilay drafitra voalohany ny ahiahin'ireo mpanoratra momba ny fahalalahan'ny Aterineto, izay mivaky mibaribary, fitenin'ny mpitàna birao :
Ny famadihana ny fiaraha-monina Rosiana ho amin'ny fampiasàna solosaina sy ny fitomboan'ny isan'ny mpampiasa aterineto no mahatonga ny filàna mampanaraka toetrandro ny lalàna Rosiana mba hahazoana antoka fa ho afaka hiatrika ny fanamby moderina sy ny tahotra izy ireo. […] Nomena andraikitra hiady anatin'izay fomba rehetra isehoan'ny fihoaram-pefy sy ny adim-poko na ady manerana ny firenena ny olom-panjakana, ary mamboly ny baranahina sy ny tsimatimanota ao an-tsain'ireo olo-meloka nahavita ireo fihetsika ireo ny valinteny tsy sahaza asetry ny fanapariahana vaovao mihoam-pampana ety anaty aterineto.
Tsy zava-baovao ao Rosia intsony ny adin'ny polisy amin'ny “fihoaram-pefy ataon'ireo mpamerimberina bitsika”. Ny volana Febroary tamin'ny taona lasa, nenjehan'ny polisy noho ny heloka bevava ny mpitarika iray avy taminà antoko politika madinika ao Rosia, hoe namerina namoaka lahatsoratra iray mandranitra avy tao amin'ny LiveJournal, nalefan'i Lev Sharansky, olona iray malaza amin'ny hanihany anaty aterineto amin'ny fanitaran-dresaka ara-politika. Stas Kalinichenko, bilaogera iray avy ao Kemorovo, no niditra sy nivoaka tao amin'ny fitsarana efa hatramin'ny volana Novambra lasa iny noho ny famerenany nibitsika ny sary iray avy taminà bokikely manohitra ny Governemanta. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, no nisamboran'ireo polisy federaly mpampihatra lalàna ny profesora iray mampianatra filozofia ao amin'ny Anjerimanontolom-Panjakana ao Maosko noho ny namerenany nandefa tao amin'ny sehatra iray fifanakalozan-dresaka tao anaty aterineto, lahatsoratra iray izay miresaka ny mety hampiongana ny ao Kremlin. Vao tamin'ity volana ity, natomboka tao Barnaul, tanàna Siberiana ny fitsarana iray, nandritra izany no niampangan'ny mpampanoa lalànam-panjakana ny mpikatroka mafàna fo iray noho izy “nitia” (tao amin'ny tambajotra sosialy iray) ny sary iray malaza ho mihoa-pefy.
Ohatra vitsivitsy niseho vao haingana ireo. Misy hafa ireto:
Maneho ny fizaràna farany amin'ny fampanginan'i Kremlin ny aterineto ilay lalàna izay hametraka ho heloka bevava ny famerenana bitsika ataon'ny “mpihoa-pefy”. Mety hanasazy ireo mpampiasa aterineto izay miverina mandefa vaovao nefa tsy manana eritreritra ny handranitra korontana ity fikelezan'aina fatratra amin'ny fanamafisana ny lalàna ity. Raha raisina ny fahatakaran'ny governemanta Rosiana ny hoe “mihoa-pefy”, ny fanaovana ny famerenana mandefa hafatra tahaka izao dia hampihorohoro koa amin'ny firotsahana an-tsehatry ny polisy ireo fanehoankevitra ety anaty aterineto avy any lavitra any.
Ho an'izay tsoakevitra rehetra mety ho azon'ny tsirairay sintonina mikasika ny lalàna farany avy amin'ny Duma, ny fahamarinana tena mampangorintsina indrindra dia mety hoe tsy miandry mandrakariva ny mpanao lalàna mba hangataka fahazoan-dàlana ara-dalàna ny masoivoho Rosiana mpampihatra lalàna rehefa tonga amin'ny hoe fanaovana polisin'ny aterineto. Amin'ny teny hafa, tsy takatry ny saintsika mihitsy izay mety ho vitan'ny polisy Rosiana ety anaty aternineto amin'izao andro izao.
Karaiba 8 ora izay